Mpanamboatra fitaovana fandoroana rano matihanina | TSAUTOP
Mpamatsy Hydro Dipping Solution tokana.
Tank Hydro Dipping
Mihaza Camo Hydrographic Film
Sarimihetsika Miaramila / Digital Camo Hydrographic
Sarimihetsika Hydrographic Water Drop & Flower
Sarimihetsika Hydrographic Marble
Sarimihetsika Hydrographic manokana
Sarimihetsika Hydrographic Carbon Fiber
Sarimihetsika Dip Hydrographic Animal
Sarimihetsika Hydrographic Designs
Sarimihetsika Famindrana Fanontam-pirinty Hydro
Sarimihetsika Hydrographic Wood Grain
Sarimihetsika Hydrographic Skull
Hydro Dip mpamatsy
TSAUTOP® Hydrographics dia afaka mamolavola sy mamatsy vahaolana amin'ny zava-maniry iray manontolo mifototra amin'ny firafitry ny atrikasa.
Ny fitaovana TSAUTOP® Hydrographics rehetra dia mahafeno ny fenitra CE
TSAUTOP dia mpamatsy vahaolana hydro dipping iray mijanona, manome karazana fitaovana hydrographic, ary milina fanosehana rano samihafa ho an'ny maodely fandraharahana hydro dipping samihafa, manana habe samihafa amin'ny tanky hydro dip izahay, tank fanasan-drano hydro dip, lafaoro, trano fivoahana, milina mandeha fiara. Sns
1.6m XP-1600 Blank Film Printer ho an'ny sarimihetsika Hydrographic namboarina
Ny mpanonta sarimihetsika TSAUTOP Digital Hydrographic dia afaka manonta ny endrikao amin'ny sarimihetsika hydrographie banga eny an-toerana sy amin'ny fangatahana. Lafo sy nandany fotoana ny famoronana lamina hydrographic manokana.1.6m XP-1600 Blank Film Printer ho an'ny mpanamboatra sarimihetsika Hydrographic namboarina avy any ShinaNy laza malaza amin'ity vokatra ity dia niforona teo amin'ireo mpanamboatra sy mpampiasa.
Tobin-drano mandeha ho azy hydro ho an'ny rim
Ny torolalan'ny TSAUTOP Fully Automatic Hydro Dipping Machine dia iray amin'ireo fitaovantsika izay ampiasaina amin'ny fitaovana fanontam-pirinty feno rano mandeha ho azy, ity fitaovana ity dia manana rafitra tsy tapaka mandeha ho azy, System Spray Activator Automatic, System Flowing Film mandeha ho azy, Arm Automatic Dipping Arm, faribolana rano, automatique sivana sarimihetsika vovoka endri-javatra.Ny olona iray dia afaka mampiasa an'io milina io hamita ny fanosehana rano, mba hamonjena ny asa maha-olombelona anao.TSAUTOP® milina fandevenana rano mandeha ho azy tanterakaTSAUTOP Fully Automatic Hydro Dipping Machine akanjo ho an'ny tompon'ny orinasa mpamono rano.Ity milina ity dia manana modely roa, maodely mandeha ho azy lakile iray ary miasa amin'ny tanana manasaraka ny rafitra tsirairay.Modely automatique: ity modely ity dia afaka mamita tsy tapaka ny dingan'ny fandevenana manontolo ao anatin'izany ny fikorianan'ny sarimihetsika, ny famafazana activator, ny fandrobohana amin'ny sandry robot ary ny fanadiovana amin'ny bokotra auto.Ny habe sy ny hafainganam-pandeha rehetra dia azo apetraka amin'ny PLC.Modely amin'ny tanana: miasa ny paompy rano, rafitra sarimihetsika mikoriana, rafitra famafazana activator, manondraka misaraka.Ny habe sy ny hafainganam-pandeha rehetra dia azo apetraka amin'ny PLC.Ity milina ity dia afaka mamita ny fandrotsahana iray ao anatin'ny 3 minitra, noho izany dia tena mahomby.Ny rafitra fikorianan'ny sarimihetsika fehezin'ny motera servo dia tena marina; dia hamonjy anao ny vidin'ny sarimihetsika.Ny rafitra famafazana activator dia azo ampifanarahana amin'ny sarimihetsika isan-karazany.Ny sandry fandevenana ampiasain'ny motera servo dia miorina tsara sy mazava tsara; izany dia hiantoka ny kalitaon'ny hydro dipping.Heating asa, 2sets 6000kw fanafanana singa afaka manomboka misaraka na rehetra na tsy manomboka, araka ny toetr'andro mafana na mangatsiaka.Ny hafanan'ny rano dia afaka mametraka 25-35 ℃.Rano faribolana sy sivana, ny herin'ny paompy rano dia 750w.manana herin'ny flushing mahery izy ary ho voasivana ny vovoka amin'ny sarimihetsika, esory avy hatrany ny vovoka amin'ny sarimihetsika, miomana amin'ny fametrahana sarimihetsika manaraka, ary faribolana mandra-pahatongan'ny tavin-drano mba hamonjena ny rano.Ao anaty iray daholo, milina iray + olona iray = orinasa iray.
Trano heva ho an'ny fandokoana
Trano heva ho an'ny fandokoanaNy tranoheva famafazana dia ampiasaina amin'ny sary hosodoko mifototra amin'ny zavatra, mba hahafahantsika manatsoboka ny endrika hydrogarphic amin'ny entana, ary mahatonga ny famolavolana hametahana ireo entana akaiky, tsy hianjera. Mazava ho azy, azonao ampiasaina ho an'ny indostria hafa ihany koa, ity milina ity dia ampiasaina indrindra amin'ny hosodoko, afaka mitroka ny zavona hosodoko, mitazona ny tontolo mazava ho an'ny sary hosodoko ry zalahy, mba hahafahanao miasa amin'ny trano rantsankazo mandritra ny fotoana maharitra.
TSAUTOP SERVICE FAMPIANARANA TSAUTOP
TSAUTOP dia vahaolana matihanina tokana amin'ny fanosehana rano, manome karazana sarimihetsika hydrographic sy fitaovana fanondrahana rano - tanky fanosehana rano, tanky fanasan-drano rano, mpanonta printy hydro, tonelina maina rano, basy famafazana sns.
Mazava ho azy fa misy ihany koa ny serivisy fanondrahana hydro namboarina, ny soTSAUTOP dia mifantoka amin'ny mpanonta printy hydro dipping sy ny sarimihetsika tsy misy na inona na inona, manome karazana habe misy sarimihetsika sy habe A3 izahay.& 1.6m sakan'ny mpanonta printy ho an'ny namboarina hydro dipping.
Raha toa ianao ka vao manomboka amin'ny hydro dipping, tongasoa eto amin'ny orinasa, ary manaiky ny fanofanana hydro dipping ao amin'ny hydro dipping laboratoara, TSAUTOP dia handamina ny matihanina hydro dipping master ho toy ny mpampianatra dobo, mba hanampy anao ho tonga ao amin'ny hydro dipping indostria.
Avia aty!!! Ny TSAUTOP dia nanolo-tena hanampy ireo mpankafy findramam-bola bebe kokoa mba hanorina sy hampiroborobo ny orinasanao manokana.
Afaka manao sarimihetsika hydrographic anao manokana miaraka amin'ny endrikao | Manaiky ny fanatsoboka rano namboarina izahay, ny fanatsoboka ny vokatrao | Manome serivisy fanofanana izahay
Manome santionany maimaim-poana ho anao izahay, na manonta modely na vokatra hydro dip.
Azontsika atao ny mamolavola ny lamina ho anao mifanaraka amin'ny zavatra takinao, avy eo manonta ny laminao amin'ny sarimihetsika tsy misy na inona na inona, mba hanaovana ny sarimihetsika hydrographic anao manokana.
Manana ny ozininay manondraka hydro izahay, miaraka amin'ny sarimihetsika hydro dip be dia be ao anaty tahiry, mba hahafahanay manome entana haingana amin'ny baikonao.
Mino izahay fa ny fototry ny fananganana fiaraha-miasa mahomby dia ny fahaiza-manao famolavolana sy ny serivisy mpanjifa.
TSAUTOP® Hydrographics dia mpanamboatra sy mpamatsy vahaolana tokana, manam-pahaizana manokana amin'ny sehatry ny fanondrahana rano. Manana trano 3 izahay izay manarona ny fitaovana fanondrahana rano, serivisy fanosehana amin'ny rano, sarimihetsika hydrographie ary fitaovana fanosehana rano.
Ho an'ny mpanamboatra vokatra sy ny orinasa hydro dipping, TSAUTOP® Hydrographics dia afaka manamboatra habe ara-dalàna sy ny habeny manokana hydro dipping tank (manual, semi sy automatique tanteraka), tanky fanasan-damba hydrographic, tonelina fanamainana, tranoheva famafazana araka izay ilainao. Ny fitaovana rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra CE. TSAUTOP® Hydrographics dia nivarotra fitaovana fanondrahana rano mihoatra ny 200 ho any Etazonia sy any amin'ny firenena hafa, indrindra fa ny fiara mifono rano. TSAUTOP® Hydrographics dia afaka mamolavola sy mamatsy vahaolana amin'ny zava-maniry iray manontolo mifototra amin'ny firafitry ny atrikasa.
Maherin'ny 30 modely vaovao, volana
7-10 andro fihenam-bidy ho an'ny fampandrosoana
Mihoatra ny 10 taona famokarana traikefa
NY HYDRO DIPPING CASE
kalitao azo itokisana mba hihaona amin'ny mpanjifantsika.
Taratasy natsofoka hydrogrpahic tselatra Hydrogrpahic Fim PVA Hydro Diping Film TSCQ209
Taratasy natsofoka ranon-jiro TSCQ209.Ny sarimihetsika hydrogrpahic tselatra dia mpamatsy avy amin'ny mpamatsy rano TSAUTOP hydro dip, azo atsoboka amin'ny sisin'ny fiara, kojakojan'ny fiara sns, no endrika malaza ho an'ny tanora, mampiseho fomba manokana. Raha tianao ity famolavolana ity, na mitady endrika bebe kokoa amin'ny sarimihetsika hydro dipping ianao, dia miangavy anao handao ny messge eto, na mandefasa fanontaniana, hifandray aminao izahay haingana araka izay azo atao.
Sarimihetsika fibre karbônina mangarahara Rose Gold Famindrana rano fanontana Sarimihetsika pva Sarimihetsika TSTY737-2
TSAUTOP dia mpamatsy rano manondraka rano any Shina, manam-pahaizana manokana amin'ny indostrian'ny rano manondraka rano mandritra ny 10 taona, miaraka amin'ny tompon'ny fanatsoboka rano 10 taona mahery sy ny fivarotana hydro dipping matihanina, ny mpiasanay rehetra dia mahay amin'ny fanosehana rano, afaka manampy anao hamaha ny fanosehana rano. olana mandritra ny dingan'ny hydro dipping, na famafazana activator na fitaovana hafa amin'ny vokatrao. Raha mitady mpamatsy hydro dipping ianao dia fidio TSAUTOP, fidio ny ekipa matihanina amin'ny hydro dipping, hahazo ny furture ianao, ataovy mahomby kokoa ny orinasanao hydro dipping.
Sarimihetsika fanontana rano fibre karbônina mainty Hydro Dipping Film TSTY883-1
TSAUTOP dia mpamatsy hydrogrpahic lehibe any Shina, manam-pahaizana manokana amin'ny indostrian'ny hydrogrpahic nandritra ny 10 taona, manana orinasa mpamokatra sarimihetsika hydrogrpahic manokana sy facorty fitaovana hydrogrpahic, izahay dia manohy ny fanavaozana momba ny sarimihetsika hydrogrpahic, mba hiantohana ny endrika malaza sy lafo indrindra amin'ny anay. katalaogy, raha manafatra film hydrogrphic avy amin'ny TSAUTOP ianao, dia hahazo katalaogy malaza indrindra eran-tany avy amin'ny TSAUTOP, tianay bebe kokoa ny olona hanatevin-daharana anay, hampiroborobo ny orinasanay.
Sarimihetsika fanontam-pirinty vita amin'ny rano fibre karbônina miloko WTP Sarimihetsika TSTR8007
TSAUTOP dia mpamatsy hydrogrpahic lehibe any Shina, manam-pahaizana manokana amin'ny indostrian'ny hydrogrpahic nandritra ny 10 taona, manana orinasa mpamokatra sarimihetsika hydrogrpahic manokana sy facorty fitaovana hydrogrpahic, izahay dia manohy ny fanavaozana momba ny sarimihetsika hydrogrpahic, mba hiantohana ny endrika malaza sy lafo indrindra amin'ny anay. katalaogy, raha manafatra film hydrogrphic avy amin'ny TSAUTOP ianao dia hahazo ny katalaogy malaza indrindra eran-tany avy amin'ny TSAUTOP, maniry bebe kokoa izahay hanatevin-daharana anay, hampiroborobo ny orinasanay.